अफगानिस्तानमा १४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ, ट्रम्प भन्छन् - वार्ताको औचित्य छैन
Mon, Jan 20, 2020 at 12:33pm
वासिङटन, २४ भदौ ।
संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार अफगानिस्तानमा सशस्त्र संघर्षरत तालिबानसँगको शान्ति वार्ता “मृततुल्य“ भएको बताउनु भएको छ । ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले अब वार्ताको तत्काल सम्भावना छैन भन्नुभयो ।
संयुक्तराज्य अमेरिका र तालिबानबीचको वार्ता सम्झौतानजिक पुगेका खबरहरु दुबैतर्फबाट सार्वजनिक भइरहेका थिए । तर गत साता काबुलमा अमेरिकी दूतावासनजिकै भएको कारबम आक्रमणबाट एक जना अमेरिकी सैनिक समेत १२ जनाको मृत्यु भएपछि ट्रम्पले वार्ता रद्द गरेको गर्नु भएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबान र अफगानी नेताहरुसँग यसै सप्ताहान्तमा आयोजना गर्न खोजिएको गोप्य बैठक पनि एकाएक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
यस आक्रमणपछि ट्रम्पले शनिबार ट्वीटमार्फत क्याम्प डेभिडमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति र तालिवान नेताहरूसँग आइतबार हुने भनिएको गोप्य बैठकहरु रद्द भएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
तालिबानीले वार्ताको टेबुलमा फाइदा उठाउन खोजेको आरोप लगाउनु हुँदै यसको अमेरिकाले बदला लिने संकेत समेत उहाँले दिनु भएको छ ।
वार्ता रद्द गरेको घोषणापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट तत्काल पाँच हजार सैनिक कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि अन्यौलमा परेको बताइएको छ ।
हाल अफगानिस्तानमा १३ देखि १४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । झण्डै १८ वर्ष अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेनाले हाल अफगानी सेनालाई तालिम, सल्लाह र हवाई सुरक्षा प्रदान गरिआएको छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिकाले अल–कायदाले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंकवादी हमला गरेलगत्तै अफगानिस्तानमा आक्रमण गरी सेना पठाएको थियो । अफगानिस्तानमा तत्कालीन तालिबानी सरकारले अलकायदालाई आश्रय दिएको अमेरिकी आरोप थियो ।
ट्रम्प प्रशासनले हाल अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक संलग्नता अन्त्य गर्न चाहेको छ । यसै सिलसिलामा सन् २०१८ देखि तालिबानसँग अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादको नेतृत्वमा वार्ता जारी छ ।
अमेरिका र तालिबानबीच हुने भनिएको सम्झौतामा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना चरणबद्धरुपमा फिर्ता हुने, अफगानिस्तानलाई जिहादीहरुको सुरक्षित आश्रयस्थल बन्न नदिइने, अफगानिस्तान सरकारसँग वार्ता गर्ने तथा अन्ततः युद्धविराम गर्ने बुँदा रहेको बताइएको थियो ।
पछिल्लो समय तालिबान समूहले राजधानी काबुल सहित देशका प्रमुख शहरमा आक्रमणलाई तिब्र बनाएको छ ।
किन जाँदैछन् मोदी सरकारका ३६ मन्त्री जम्मु-कश्मिर ?
दक्षिण कोरियामा अमेरिकी राजदूत ह्यारीसको जुँगाको चर्को विरोध
ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सिनेटमा पठाउने प्रस्ताव पारित
बेल्जियमकी राजकुमारी नेपाल भ्रमणमा आउँदै
ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव सिनेटमा अघि बढ्ने !
निर्भया बलात्कार काण्ड : फासी चढ्नुअघि परिवारसँग अन्तिम पटक भेट्नेछन् दोषी
अमेरिका र उत्तर कोरियाको वार्ता नयाँ चरणमा हुने
अष्ट्रेलियाको डढेलो : पृथ्वी घुमेर यसरी पुग्दैछ फेरि अस्ट्रेलियामा धुवाँ
अमेरिका-इरान द्वन्द्वले उत्तर कोरिया उत्साही, चीनको टाउको दुखाइ
मुशर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने विशेष अदालतको गठन नै ‘असंवैधानिक’
फिलिपिन्समा ठूलो ज्वालामूखी विस्फोटको खतरा, शहर खाली गराइदैं
इराकमा रहेको अमेरिकी सैनिक अड्डामा पुन: रकेट आक्रमण
आँधीका कारण अमेरिकामा एघारको मृत्यु, बाह्र सय उडान रद्द
युक्रेनी विमान दुर्घटनाबारे झुट बोलेको भन्दै इरानमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन
अमेरिकामा भिषण आँधी, कम्तिमा ८ जनाको मृत्यु
ट्रम्पद्वारा किम जोङलाई जन्मदिनको शुभकामना, उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग तत्काल वार्ता नगर्ने
इरानी शीर्ष नेतामाथिको अमेरिकी आक्रमण असफल !
भुलवश युक्रेनी विमान खसालेको इरानद्वारा स्विकार
ट्रम्पको चेतावनी : इरानसँग अब कहिल्यै आणविक हतियार हुँदैन
ईरानसँग बिनाशर्त वार्ता गर्न अमेरिका तयार
राजपरिवारको वरिष्ठ सदस्यबाट पछि हट्ने ह्यारी–मेगनको घोषणा
ह्वाइट हाउसबाट ट्रम्पकाे सम्बोधन : इरानमाथि नयाँ नाकाबन्दी
इरानको आणविक भट्टी नजिकै ४.५ म्याग्नीच्युडको भूकम्प
सुलेमानीको शवयात्रामा भएको भागदौडमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५० पुग्यो
अमेरिकाद्वारा इराकबाट सेना फिर्ता गर्ने कुरा अस्वीकार
इरानले तोक्यो ट्रम्पको टाउकोको मूल्य
इराकको संसदले गर्‍याे अमेरिकी सैनिकलाई देशबाट हटाउने प्रस्ताव पारित
अस्ट्रेलियामा लागेको आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर, ५० करोड वन्यजन्तु मारिए
अष्ट्रेलियाको डढेलो : चर्को हावा चलेका कारण डढेलो निभाउन मुश्किल